Quickemu, mamorona sy mitantana milina virtoaly Linux, macOS ary Windows | Ubunlog
Quickemu, mamorona sy mitantana milina virtoaly Linux, macOS ary Windows
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery an'i Quickemu isika. Amin'izao fotoana izao dia mora ny mamorona milina virtoaly noho ny programa toa an'i VirtualBox, VMware ary ny sasany hafa. Ity fampiharana ity dia mikendry ny ho safidy tsotra kokoa amin'ny VirtualBox ary manampy amin'ny famoronana milina virtoaly haingana, mikarakara ny fampidinana ireo sary ISO ilaina.
Ity programa ity dia navoaka voalohany tamin'ny volana septambra 2021. Izy io dia noforonina tamin'ny voalohany fomba haingana hitsapana ny fizarana Gnu / Linux, izay azo tehirizina na aiza na aiza ny fanefena milina virtoaly, ary tsy nilaina ny fahazoan-dàlana avo lenta mba hampandehanana milina virtoaly. Hatramin'ny nanombohany dia nivoatra ny programa ary mifanaraka amin'ny macOS sy Windows koa ankehitriny.
Quickemu dia fitaovana mifototra amin'ny terminal izay ahafahantsika mamorona milina virtoaly desktop, izay azontsika fehezina mora foana. Ity fitaovana ity dia hanaisotra ireo nuance rehetra izay hitantsika rehefa manamboatra milina virtoaly. Manao izany izy amin'ny alalan'ny fisafidianana ny fanamafisam-peo tsara indrindra, mifototra amin'ny loharanon'ny rafitra misy, mba hiasan'ny milina virtoaly.
Na dia mampiasa Quickemu aza isika dia tsy mila manamboatra na inona na inona mba hiasa ny milina virtoaly azonao ampiasaina ny safidy fandrindrana manokana ao amin'ny rakitra .conf.
1 Toetra ankapoben'ny Quickemu
1.1 Rafitra miasa
2 Mametraka Quickemu amin'ny Ubuntu
2.1 Topi-maso vetivety amin'ilay programa
Toetra ankapoben'ny Quickemu
Tsy mamela misintona sary ISO hamorona milina virtoaly.
Afaka manao izany isika mitantana ny milina virtoaly misy anay.
Hanana ny mety hitranga isika mamorona fikandrana default rehefa manamboatra milina virtoaly isika.
Manohana ny mamorona milina virtoaly Windows sy macOS. Izy io koa dia manana fanohanana ny fizarana Gnu / Linux isan-karazany, anisan'izany ny elementaryOS, ZorinOS, Ubuntu, sy ny maro hafa. Anisan'izany ny fanohanana ny FreeBSD sy OpenBSD.
EFI sy BIOS nolovaina.
Tsy mila fahazoan-dàlana ambony ianao miasa.
Hanana isika fizarana takelaka fampiantranoana / vahiny.
Afaka misafidy ny fomba fanerena sary.
Ampifamadiho ireo fitaovana USB mpampiantrano / vahiny amin'ny milina virtoaly.
Ahitana fanohanana ny SPICE fifandraisana.
Fizarana rakitra Samba ho an'ny vahiny ho an'ny Gnu / Linux, macOS ary Windows (raha apetraka amin'ny mpampiantrano ny smbd)
Santionany amin'ireo fisehon'ity programa ity ireo. Afaka manatona azy rehetra amin'ny antsipiriany avy ao amin'ny pejy GitHub tetikasa.
Amin'izao fotoana izao, Quickemu dia manohana ireto rafitra fiasa manaraka ireto:
macOS (Monterey, Big Sur, Catalina, Mojave ary High Sierra)
Microsoft Windows (8.1, 10 ary 11, anisan'izany ny TPM 2.0)
Ubuntu sy ny tsirony ofisialy rehetra (Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, ary Xubuntu)
Linux Mint Cinnamon, MATE ary Xfce.
FreeBSD sy OpenBSD.
Para Microsoft Windows y macOS, zava-dehibe ny mamaky ny naoty ao amin'ny pejin'ny tetikasa Quickemu, satria misy voatanisa toromarika manokana sy ny mampiavaka azy rehefa mamorona milina virtoaly.
Mametraka Quickemu amin'ny Ubuntu
Quickemu azo alaina amin'ny PPA ho an'ny Ubuntu / Pop! _OS / Linux Mint. Mba hametrahana azy dia mila manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) fotsiny isika ary ampio ny PPA miaraka amin'ny baiko:
Aorian'ny fanavaozana ny rindrambaiko azo avy amin'ny repository dia afaka mametraka ny programa mihazakazaka amin'ny terminal mitovy:
Ny Quickemu GUI dia antsoina quickgui, ary azo alaina amin'ny PPA ho an'ny Ubuntu / Pop ihany koa! _OS / Linux Mint. Ao amin'ny tahiry GitHub, izy ireo dia manondro fa azo alaina ny binary Quickgui. Ireo mpampiasa izay liana amin'izany, dia afaka mijery ny toromarika fametrahana. Tsy maintsy milaza aho fa rehefa nanandrana ity interface graphique ity aho dia niseho tamin'ny teny alemana izy io, ary tsy afaka nandika azy tamin'ny fiteny hafa aho.
Topi-maso vetivety amin'ilay programa
Afaka mampiasa ny baiko isika quickget for misintona ho azy ny dikan-tenin'ny Ubuntu:
Con Quickemu dia hanomboka ny fametrahana milina virtoaly:
Afaka mamorona hitsin-dàlana amin'ny desktop hanombohana ny milina virtoaly. Ity misy ohatra iray momba ny fomba hamoronana hitsin-dàlana ho an'ny milina virtoaly vao noforoninay:
Voatahiry ao ny hitsin-dàlana ~ / .local / share / fampiharana.
Raha tianao izany vonoy ny milina virtoaly noforonina sy ny fandrindrana azy izay noforoninay hatreto, ny baiko ampiasaina dia:
Para esory ity programa ity, ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia tsy hisy intsony ny hanoratra:
Aorian'izay, ho esory ny PPA amin'ny rafitray, ao amin'ilay terminal ihany no tokony hanatanterahanao:
Raha hampiasa ity fampiharana ity, ny CPU ny fitaovantsika dia tsy maintsy manohana ny virtoaly fitaovana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Quickemu, mamorona sy mitantana milina virtoaly Linux, macOS ary Windows
asiusblack dia hoy izy:
Ah tsara, safidy ho an'ny Virtualbox.
Afaka maka milina efa noforonina ao amin'ny Virtual Box amin'ity programa ity ve ianao?
Valio an'i Asiusblack
Damien A. dia hoy izy:
Salama. Heveriko fa tsy izany, satria ny kapila dia voatahiry ho .qcow2. Fa andeha, jereo ny fitehirizan'ny tetikasa fa mbola manana fampahalalana amin'ny antsipiriany ao ianao. Salu2.
Valiny tamin'i Damián A.
Sebastian Zapateiro dia hoy izy:
Misaotra anao nizara ity vaovao ity!
Azoko antoka fa safidy azo ampiharina sy mahomby kokoa izany rehefa mamorona milina virtoaly.
Valiny tamin'i Sebastián Zapateiro
PAPPL, rafitra iray ho an'ny fampivoarana ny fampiharana fanontam-pirinty IPP Everywhere
Tatitra momba ny vokatry ny orinasa Mozilla, Mozilla Corporation isan-taona ho an'ny 2020